आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल (२०७८ भदौँ ६ गते आइतबार), Daily Horoscope of Sunday 22th August 2021 | Mero Jyotish
आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल (२०७८ भदौँ ६ गते आइतबार), Daily Horoscope of Sunday 22th August 2021
वि. सं. : २०७८ भदौँ ६ गते आइतबार
इ.सं. : 22th August 2021 (Sunday)
सूर्योदय: विहान 05:38 बजे
सूर्यास्त: बेलुका 18:33 बजे
तिथि : पूर्णिमा 17:13 सम्म, तत्पश्चात् प्रतिपदा
पक्ष : श्रावण शुक्लपक्ष
नक्षत्र : धनिष्ठा 20:29 सम्म, तत्पश्चात् शतभिषा
योग : शोभन 10:47 सम्म, तत्पश्चात् अतिगण्ड
करण : विष्टि 06:29 सम्म, तत्पश्चात् बव
चन्द्रराशि: मकर 08:37 सम्म, तत्पश्चात् कुम्भ
मेष राशि भएकाहरूका लागि आज दिन र समय मध्यम रहनेछ । चन्द्रमा दशौं भावमा भ्रमण गरिरहेकाले आँटे ताकेका काम अधूरै रहनेछन् । आफन्तले कुरा काट्नेछन् । व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउनेछ । मन अस्थिर हुनेछ । नयाँ कामको थालनी नगर्नुहोला । यात्रामा पनि सावधान हुनुहोला ।
वृष राशि भएकाहरूका लागि आज पनि समय ठीक छैन । चन्द्रमा नवौं भावमा भ्रमण गरिरहेका छन् । त्यसैले एक्कासी नयाँ रोगले दु:ख दिने, आफन्तसंग वादविवादमा फसिने, मनमा नकारात्मक सोचाइ बढ्न सक्ने देखिन्छ । आज जे गर्दै हुनुहुन्छ निकै होसियारीका साथ गर्नुहोला ।
मिथुन राशि भएकाहरूका लागि आज पनि समय खराब छ । चन्द्रमा आठौं भावमा भ्रमण गरिरहेकाले तपाइँको आज सरकारी कार्यालयबाट हुने काम बन्नेछैन । आफ्नै सन्तानसंग झगडा हुन सक्छ । दुर्घटनाको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । आजदेखि दीर्घ रोग पनि देखा पर्नेछ । आज यात्रा र नयाँ कामको थालनी पनि सकभर नगर्नुहोला ।
कर्कट राशिका लागि आज पनि समय शुभ छ । सातौं स्थानमा चन्द्रमा भ्रमण गरिहेकाले टाढाबाट धन आउन सक्छ । परिवारका सदस्यको सहयोगमा यसअघिका अधूरा कार्य आज पूर्ण हुनेछ । नयाँ ठाउँमा पारिवारिक भ्रमण पनि हुन सक्ने योग छ । मनमा शान्ति छाउने छ ।
सिंह राशि भएकाहरूका लागि पनि आज समय राम्रो छ । छैटौं भावमा भ्रमण गरिरहेका चन्द्रमाले तपाइँलाई सकारात्मक बाटोतर्फ हिंडाउन भूमिका खेल्नेछन् । आज स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । शत्रुमाथि तपाइँको जीत हुनेछ । पढाइ लेखाईमा ध्यान केन्द्रित हुने देखिन्छ । समय अत्यन्तै शुभ रहेकाले नयाँ कार्यको थालनी आज गर्न सक्नुहुनेछ ।
कन्या राशि भएकाहरूका लागि आज पनि समय शुभ छैन । चन्द्रमा तपाइँको राशिमा पाचौं स्थान बनाएर भ्रमण गरिरहेकाले यात्रामा समस्या आउनेछ । दु:ख पर्ने खबर सुन्नुपर्नेछ । जे काम गर्न खोजेपनि अवरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । मनमा तनाव उत्पन्न हुनेछ, संयम हुनुहोला ।
तुला राशि भएकाहरूका लागि आज समय भरपर्दो छैन । चौथो स्थानमा चन्द्रमा भ्रमण गरिरहेका छन् । त्यसैको प्रभावले आर्थिक संकट पर्न सक्नेछ । आज लेनदेनको कारोबार नगर्नुहोला । खानामा गड्बढी हुनाले पेटरोगको सामना गर्नुपर्नेछ । औषधि उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफन्त पनि विनाकारण निहुँ खोज्दै आउनेछन् । समय खराब रहेकाले सर्तक हुन आवश्यक छ ।
वृश्चिक राशि भएकाहरूका लागि आज पनि समय शुभ छ । तृतीय भावमा चन्द्रमा भ्रमण गरिरहेका छन् । त्यसैले तपाइँको मन शान्त हुनेछ । कामबाट आर्थिक लाभ हुनेछ । नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज गर्नुहोला । धार्मिक कार्यमा धन जानेछ । आर्थिक पक्ष सबल रहनाले सहयोग गर्ने मन लाग्नेछ ।
धनु राशिका लागि आज पनि समय अत्यन्तै खराब छ । द्धितीय भावमा अर्थात शत्रु भावमा चन्द्रमा भ्रमण गरिरहेका छन् । त्यसको नकारात्मक प्रभावमा तपाइँ हुनुहुन्छ । तपाइँलाई आज आँखामा समस्या देखिन सक्छ । बिरोधीहरू पनि बढ्नेछन् । प्रेममा धोका पनि हुन सक्छ । नगद पैसा हराउन सक्छ । स्वास्थ्यमा पनि समस्या देखिने योग रहेकाले सर्तक हुनुहोला ।
मकर राशि भएकाहरूका लागि आज अत्यन्तै समय राम्रो रहनेछ । आफ्नै भाग्य स्थानमा चन्द्रमा भ्रमण गरिरहेका छन् । यसको सकारात्मक प्रभावले आज आदर सत्कार पाइने ठाउँमा सरिक हुन पाइनेछ । विद्यामा प्रगति र प्रेम सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । स्वास्थ्य मजबूत र यात्रा फलदायी रहनेछ । नयाँ कामको थालनी गर्नका लागि आज उपयुक्त समय रहेको छ ।
कुम्भ राशिका लागि आजको दिन त्यति अनुकूल देखिएको छैन । १२औं भावमा रहेका चन्द्रमाले मानसिक पीडा, मानहानी हुन सक्नेछ । आफन्त धोका दिन सक्नेछन् । आर्थिक कारोबार आज नगर्नुहोला । गरिरहेको काममा चित्त बुझ्ने छैन । खर्चमा एक्कासी वृद्धि हुने योग छ ।
मीन राशि भएकाहरूका लागि आज पनि समय शुभ रहनेछ । ११औं भावमा चन्द्रमा भ्रमण गरिरहेका छन् । त्यसैले धन र जमीन लाभ हुनेछ । खुशीका खबर हुन्न पाइनेछ । मान सम्मान पनि आज तपाइँलाई मिल्न सक्छ । साथी भाइको सहयोगले आँटेका कार्य पूर्ण हुनेछ ।